Njem mmụta si Bucharest | Akụkọ Njem
Njem site na Bucharest
Mariela Carril | | Bucarest, Ihe ị ga-ahụ
Ọtụtụ mgbe isi obodo nke a mba bụ ihe kasị mkpa na kasị gara obodo, ma ọ dịghị ụzọ ọ kwesịrị ya naanị gara. Ọ bụrụ na ịchọrọ ọwụwa anyanwụ Europe ma gaa Romania anọla n'ime Bucarest naanị.
Ọ bụ ezie na obodo ahụ mara ezigbo mma gburugburu ya bu ihe kwesiri ihu. Site na Castle's Castle, ikekwe na-agbaga na Bulgaria agbata obi ma ọ bụ na-agagharị na Carpathians, onyinye dị iche iche ma na-atọ ụtọ. Chọrọ:
1 Ndị carpathians
2 Obí Mogosoaia
3 Ebe obibi ndị mọnk nke Snagov
4 Ogige Bran
5 Leslọ nke Peles
6 Brasov na Sinaia
Na aha ahụ m nwere ike iche ihe nkiri ala. Ma ọ bụ. Naanị awa abụọ si Bucharest e nwere ndị Carpathians, ugwu dị iche iche site na ya i nwere ike bulie onu ma ọ bụ ibugo onu. Enwere netwọkụ eziputara nke ọma nke ụzọ nsogbu dị iche iche.
Iji maa atụ, si n’obodo akpọrọ BusteniDị ka onye nwe ụzọ kachasị ogologo na mba ahụ, ịnwere ike ịga ije elekere abụọ nke na-amalite n'ọdụ ụgbọ njem a, na-aga n'ihu n'akụkụ osimiri ahụ wee rute n'oké ọhịa. Ikekwe nkeji ole na ole ndị ahụ bụ nke nkpoda ma ọ bụrụ na oge ahụ aga, ọ ga-eme ka ọ dị nro ma ọ ga-atọ gị ụtọ ịga ije pụrụ iche na nsụda mmiri gụnyere.
Na eriri uzo ebe, nhọrọ ozo bu iwere ya rigoro ugwu bucegi. Echiche dị oke mma ma ị gafere nnukwu nkume a maara dị ka The Sphinx n'ime nkeji. N'oge ị ga-ahụ Obe nke ndi dike bụ́ nke e debere n’ebe ahụ iji mee ememe ncheta nke ndị agha e gburu n’oge Agha Worldwa Mbụ. Echiche sitere n'akụkụ a dị ebube ma gbatịa maka kilomita.
Ekwela ka o duhie 15 kilomita ileta ọmarịcha obí eze a. E wuru ya na mbido narị afọ XNUMX site n'aka onye ọchịchị Romania bụ Constantin Brancoveanu ma nwee byzantine ndozi akpali akpali na Baroque na Renaissance nkọwa.
E mechara gbuo onye ọchịchị a ma werekwa akụ na ụba site na ndị Ottoman mwakpo. Obí ahụ ghọrọ ụlọ ọbịa ma na narị afọ sochirinụ ka ọ laghachiri ezinụlọ mbụ. N'oge agha Russia-Turkish nke ọkara nke abụọ nke narị afọ nke XNUMX ka e bibiri ya na n'Agha Worldwa Mbụ ọ dịịrị ndị German ịwakpo ya, n'ihi ya ọ nweghị ndụ dị jụụ. Luckily ha ewughachi ya.
N'okpuru ọchịchị Kọmunist ọ ghọrọ obodo, ndị nwụchiri ndị nwe ya ma tufuo akụkụ ọrụ ya. Ọ bụ na ngwụsị afọ ndị 50, ka nọ n'okpuru ndị Kọmunist, ka e mere ka obí eze bụrụ ebe ngosi ihe mgbe ochie. Taa bụ oke njem, a ụlọ mara mma nke nwere ubi magburu onwe ya.
Ọ dị nso na Bucharest, di anya site na 40 kilomita, n’etiti ogologo ogologo nrọ, n’obere agwaetiti nke akwa mmiri jikọtara na ala. Ya bụ, ị ga-eji ụkwụ ma ọ bụ jiri ụgbọ mmiri rute obodo dị nso. O nwere obi uto inwe nnukwu ogidi, nke kachasi na mba di n'ime ulo uka, juputara na frescoes site na XNUMXth century.
Akụkọ ihe mere eme na-agwa anyị na ebe obibi ndị mọnk a bụụrụ ebe mgbaba maka ndị ọchịchị na ndị gbara ọsọ ndụ n'oge ọgba aghara Romania na ọ bụ n'ihi na ọ nọbu na nzuzo karịa oke ọhịa na mmiri. Otu akụkọ mgbe ochie na-ekwu na n'ime ebe obibi ndị mọnk a bụ ezigbo ili nke Vlad the Impaler, n'ihu ebe ịchụàjà nke chọọchị ahụ. E gwupụtabeghị ihe ndị na-eme ka ọ gwụla ma ugbu a, a chọtala ọkpụkpụ mmadụ na anụmanụ, ọ bụ ezie na ọ dịghị ihe na-egosi na ha bụ ihe foduru nke Dracula.
Taa ọ bụ ebe dị jụụ ma dịkwa jụụ. Ọ na-emepe site na 7:30 nke ụtụtụ na elekere isii nke ụtụtụ na ọnụ ahịa nnabata na-akwụ ụgwọ 6 lei maka okenye.
Ọ bụ nnukwu ụlọ a maara dị ka Lọ Dracula mana ekwesiri icheta na ọ bụghị otú ahụ, ọ bụ ezie na ọ doro anya na ọ bụ ndọta ndị njem. Ọdịdị ahụ bụ ochie na ọ wuru na narị afọ nke iri na anọ, nke dị na oke n'etiti mpaghara Walachia akụkọ ihe mere eme na mpaghara Transylvania. Na 20s nke narị afọ gara aga ọ bụ ebe obibi nke eze ya mere, nwunye eze nwanyị nke Romania ahụ mgbe ahụ rụzigharịrị ya kpamkpam na ndị nketa ya nwetara ya mgbe ọ nwụrụ.
Taa ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị gara na mba ọ bụ ezie na ọ bụ ka a onwe onwunwe na Ọ dị kilomita 200 site na Bucharest. Ọ bụ ebe mara mma, nke Bucegi na Piatra Craiului gbara gburugburu: ugwu dị elu, ala dị larịị, osimiri, ọwa mmiri, oke ọhịa. Nwere ike ịga ebe ụgbọ oloko si Bucharest Nord Gara A ọdụ na Brasov na njem nke awa atọ na ọkara maka ọnụego ego nke euro 8.
Ọ na-emepe na Mọnde site na 12 ruo elekere isii nke mgbede na site na Tọzdee ruo Sọnde site na elekere 6 nke ụtụtụ ruo elekere isii nke mgbede (n'oge dị elu site na Eprel ruo Septemba); ma mechie awa abụọ tupu oge dị ala (site na Ọktọba ruo Machị).
Mgbe Ọ bụ ebe obibi nke ezinụlọ ndị Romania ma taa ọ bụ ụlọ ngosi ihe nka nke arịa na nka nka. Ọ bụ ihe gbasara a neo renaissance style nnukwu ụlọ nke dị n'okporo ụzọ ochie ochie nke jikọtara Transylvania na Wallachia.
E wuru ya n’agbata ngwụcha narị afọ nke iri na itoolu na mmalite nke narị afọ nke 48 site na iwu nke Eze Carol nke Mbụ na n’eziokwu ọ karịrị ụlọ elu ọ bụ obí eze. Ọ dị nso na obodo Sinaia, dị kilomita XNUMX site na Brasov na 124 kilomita site Bucharest. N'ezie Ọ bụ akụkụ nke ihe mgbagwoju anya nke Pelisor Castle na Foisor Hunting Reserve.
N'oge ụfọdụ nke ndụ ya ọ kpachapụghị anya: dịka ọmụmaatụ, n'okpuru ọchịchị Ceasescu ọ nọgidere na-emechi ma gbahapụ n'etiti 1975 na 1990. Ọ bụ mgbe ọdịda nke komunizim gasịrị ka amụrụ ụlọ ahụ meghere n'ihu ọha. Taa enwere ụlọ oriri na ọ hotelsụ ,ụ, ụlọ nri na ebe obibi ndị isi na Foisor Castle.
A na-eduzi nleta nleta na ụlọ ihe ngosi nka Nleta ọ bụla na-eme ka ị mara akụkụ dị iche, ya mere, ọ ga-adịrị gị mfe ịga njem zuru ezu iji mara ala abụọ ahụ. Ga-ahụ Apartlọ Imperial, Hall of Honor, Armory, Imperial Suite na ime ụlọ dị iche iche n'ụdị mma dị iche iche.
Brasov na Sinaia
Anyị akpọwo Brasov n'ezie obodo ahụ mara mma n'onwe ya. Ọ nwere mwute aha nke Obodo Martyr maka ọnụọgụ nke ndị nwụrụ n'ihi okwukwe ha nyere ya na Romania mgbanwe nke 1989. Ọ dị kilomita 166 site na Bucharest ma i rute n'ọdụ ụgbọ oloko ma ọ bụ bọs. Ọ bụrụ na ị bịa ebe a, ị ga-aga, ị nwere ike ịga leta otu n’ime ya ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, mgbidi ochie, ụlọ arụsị na ụka.
Maka akụkụ ya Sinaia bụ ebe mgbago ugwu dị nso na Peles Palace, 48 kilomita site na Brasov. Nwere ike ịga ebe obibi ndị mọnk nke otu aha ahụ, ọdụ ụgbọ oloko ochie, otu di na nwunye na-atụgharị anya na n'ezie ihe kachasị mma ị nwere ike ime bụ ịga leta Peles Palace na ndị ọzọ na mgbagwoju anya n'otu njem ahụ.
Imecha ị nwere ike ịgafere na bulgaria. Bucharest dị nso na oke ókè ya enwere ọtụtụ njem Ma ọ bụ ịnwere ike ime nleta ahụ n'onwe gị, agbanyeghị na ọ nwere ike isiri gị ike iji ụgbọ njem ọha na-enweta obodo kachasị oke, yabụ a na-atụ aro ka ndị ọrụ njem njem.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Bucarest » Njem site na Bucharest